४१ जिल्लामा ‘लकडाउन’ : नौ जिल्ला रेडजोनमा, पाँच जिल्लामा शून्य संक्रमित | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more ४१ जिल्लामा ‘लकडाउन’ : नौ जिल्ला रेडजोनमा, पाँच जिल्लामा शून्य संक्रमित
भदौ १ गते, २०७७ - ०७:०८
काठमाडौं । लकडाउन खुलेसँगै कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि अधिकांश जिल्ला फेरि लकडाउनतर्फ नै फर्किएका छन् । कतै निषेधाज्ञामार्फत सिडिओले त कतै स्थानीय तहले निर्णय गरेर अत्यावश्यक बाहेकका व्यवसायमा रोक लगाएका छन् । त्यसको स्वरूप भने लकडाउनकै जस्तो छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – आइतबारसम्म ४१ जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण लकडाउन गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार २८ जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनअनुसार निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । अन्य जिल्लामा स्थानीय तहले लकडाउन लागू गरेका छन् ।
पर्सा, सप्तरी, बाँके, बारा, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा, बर्दिया, रौतहट, कपिलवस्तु, दोलखा, नवलपरासी पश्चिम, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रामेछापमा जिल्लाभरि नै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा केही खुकुलो भए पनि ती जिल्लाका सहरी क्षेत्र भने बन्द रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नुवाकोटमा ६ स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा छ भने जिल्लाभरि नै अत्यावश्यक बाहेकका सेवामा रोक लगाइएको छ ।
‘रेडजोन’ मा भए पनि उपत्यकामा भने निषेधाज्ञा जारी गरिएको छैन । तर, विभिन्न सेवा बन्द गरिएका छन् । मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले लकडाउन नै लागू गरेको छ । कागेश्वरी मनहराले पनि अत्यावश्यक बाहेकको व्यवसाय बन्द गराएको छ । उपत्यकामा सवारीसाधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यस्तै रेस्टुरेन्ट, सैलुन र जिमखाना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन् । अटेर गर्नेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ ।
सरकारले दुई सयभन्दा धेरै संक्रमित भएको जिल्लालाई ‘रेडजोन’ मा राखेको छ । हाल काठमाडौं, मोरङ, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र बाँके ‘रेडजोन’ मा छन् । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा एक हजार चार सय २९ र पर्सामा एक हजार ८४ सक्रिय संक्रमित छन् ।
तर, कोरोनाका कारण अस्पतालहरूले बिरामी लिने गरेका छैनन् । वृद्धवृद्धा त झन् अस्पताल जाने गरेका छैनन् । देशभर पनि २६ हजार ६ सय ६० संक्रमितमध्ये दुई हजार एक सय ६९ जना अर्थात् आठ प्रतिशत वृद्धवृद्धा छन् । देशभर एक सय चारजनाको र उपत्यकामा नौ जनाको मृत्यु भएको छ । उपत्यकामा मृत्यु भएका अधिकांश ५० वर्षभन्दा माथिका छन् ।
सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका सरुवारोगविज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार वृद्धवृद्धामा कोरोना संक्रमण बढ्नुले ढोकाढोकामा संक्रमण पुगिसकेको संकेत गर्छ । उपत्यकामा लकडाउन अन्त्य भएपछि बढी संक्रमण फैलिएको उनी बताउँछन् ।
‘वृद्धवृद्धाको चहलपहल घर भन्दा बाहिर हुँदैन । यस्तो वेला उनीहरूमा कोरोना बढी देखिनु भनेको गम्भीर विषय हो । काठमाडौंको जनसंख्या बढी भएकाले पनि कुनै न कुनै कारणले केस फैलिएको छ,’ डा. पुनले भने, ‘वृद्धवृद्धामा बढी देखिनु भनेको क्रमशः समुदायमा संक्रमण फैलिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ ।’
त्यस्तै, कोरोनाबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै मृत्यु हुनेको संख्या एक सय चार पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । मृत्यु हुनेहरू पर्साका एक पुरुष र मोरङकी एक महिला छन् ।
भदौ १ गते, २०७७ - ०७:०८ मा प्रकाशित